ဟုတ်လား? ဖြစ်နိုင်လား ပထမ APUI သည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည် Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 8, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အဆိုပါ APUI (Application Programming User Interface) သည်ဤနေရာတွင်ရှိနိုင်သည်။ Yahoo! ကိုကျွန်တော်မျက်စိကြည့်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများကိုစစ်ထုတ်။ ကိုင်တွယ်နိုင်သောအင်ဂျင်တစ်ခု RSS ကို feeds ။
ဒါကအစပဲရှိသေးတယ်၊ စောင့်ကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလိမ့်မယ်။ ငါဒီလိုအပ်ချက်အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ် နည်းပညာကို ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းနှင့် ဟောကိန်းထုတ် ၂၀၀၇ ခုနှစ်သည်နှစ်ဖြစ်သည် GUI ကို ပေါင်းစည်းမှုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ဒီဟာကခွဲထွက်ရေးနှစ်ဖြစ်မယ်လို့ငါတကယ်ယုံကြည်တယ်
အကယ်၍ Yahoo! ပိုက်များကို RSS ကိုကိုင်တွယ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် RSS မှအခြားသို့ပြောင်းရန်အဆင့်တိုဖြစ်သည် XML ကို API ကို နှင့်ဝက်ဘ်ဝန်ဆောင်မှု။ လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီ interfaces ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ခိုင်မာလာမှာဖြစ်လို့ developer တွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေစတင်ကျဆင်းလာလိမ့်မယ်။
လုပ်စရာများစွာကျန်ရှိနေသေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဝဘ်ကိုပြောင်းလဲစေပြီး application များကိုတည်ဆောက်ခြင်းကိုနောက်အဆင့်သို့တက်စေနိုင်သည်။ Rapid programming သည်ရက်သတ္တပတ်များ၊ နာရီများ၊ မိနစ်များအထိဒေတာများကိုပြောင်းလဲရန်၊ ၎င်းကိုစီစစ်ရန်နှင့်၎င်းပေါ်တွင်အခြေခံသည့်အဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပေါ်ရန်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ထိုင်ပြီးနောက်လာမယ့်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကို 'flow-charting' လုပ်လိုက်တာလို့မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အရေးအသားကုဒ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲကုန်ကျမှု၊ developer များ၊ ဘတ်ဂျက်အလွန်အကျွံနှင့်နောက်ကျမည့်စီမံကိန်းများမရှိပါ။
နောက်လာမည့်ဆယ်နှစ်ခန့်ကာလအတွင်း software developer များလိုအပ်မှုသည်နောင်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဆက်လက်မြင့်တက်လာလိမ့်မည်။ သို့သော်ထိုနောက်မှ developer များအနေဖြင့် software, workflows, interaction နှင့် data processing များကိုတည်ဆောက်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင့် APUIs များကိုရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုသောကြောင့်လိုအပ်လာသည်။
10:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 1, 01
ပထမအချက်အနေဖြင့် Demicron's Wirefusion သည် java အက်ပလီကေးရှင်းများကိုမည်သို့တည်ဆောက်နိုင်ကြောင်းသဘောတရားနှင့်ဆင်တူသည်။
တစ် ဦး "module ကို" ထဲမှာ drop အခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက် parameters များကိုသတ်မှတ်နှင့်ထုတ်ဝေရန်။
Demicron သည် 3D အထောက်အပံ့အချို့ကိုဖြုတ်ချကာ 2D ပုံရိပ်ကိုင်တွယ်မှုအချို့ကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့် Wirefusion“ lite” ဖြင့်ထွက်ပေါ်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
10:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 57
ငါတို့အဲဒီမှာရောက်နေပြီ။ အသုံးချမှုကိုသတိရပါ Sagent ဖြေရှင်းနည်းများ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က၎င်းသည် XML အစီအစဉ်များကိုရေးသော ETL GUI တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဆွဲချခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူရှိလမ်းတစ်ဝက်ရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အစီအစဉ်များကိုကရက်သတ္တပတ်များထက်နာရီအတွင်းရေးလိုက်နိုင်ဘူး။ တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာ 'webify' ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
၀ န်ဆောင်မှုများပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည် WSDL ကိုဖတ်ရန် GUI တစ်ခုမျှတည်ဆောက်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်အွန်လိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ချုံ့ခြင်းမျက်နှာပြင်ကိုတည်ဆောက်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက ၁ ပေနီးကပ်လာပြီ။ ငါက Yahoo သည် Pipes များကို“ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး” နှင့်တတိယပါတီများအား၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် module များတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ငါကဂျာဗားကောင်တော့မဟုတ်ဘူး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၎င်းတို့သည်တိတ်ဆိတ်သောလူများဖြစ်ပုံရသည်။ Sun ၏လွှမ်းမိုးမှုဆက်လက်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှဂျာဗားကလည်းထပ်မံတိုးတက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ .NET သည်စွမ်းဆောင်ရည်အချို့ကိုအတိအကျတုပပြီးအခြားပလက်ဖောင်းများကို Java ကိုအလွယ်တကူလက်ခံကျင့်သုံးသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ Java တွင်အိမ်စာလုပ်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ 🙂
ငါထွက်ကြည့်မယ် ကြေးမုံ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်